HomeWararka CiyaarahaManchester City oo xiriir la sameysay wakiilada Karim Benzema
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay la xiriirtay wakiilada Karim Benzema si ay ugala hadlaan suurtogalnimada u dhaqaaqista weeraryahanka dhexe ee Real Madrid .
33-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku qaadanaya Los Blancos xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 15 gool, waxaana uu gacan ka geystay sideed caawin 17 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska qandaraaskiisa haatan ee Bernabeu wuxuu dhacayaa Juun 2023, si kastaba ha ahaatee, kooxda Carlo Ancelotti ayaa loo maleynayaa inay bartilmaameedsaneyso labada xidig ee Kylian Mbappe iyo Erling Braut Haaland .
Sida laga soo xigtay El Nacional , kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa la xiriirtay wakiilada Benzema si ay ugala hadasho suurtagalnimada inuu u wareego Premier League, wakiilada Faransiiska ayaa ‘aad u soo dhaweeyay’ fikradda ah u dhaqaaqida Etihad Stadium.
Laacibka afarta jeer ku guuleystay Champions League ayaa dhaliyay 294 gool, waxaana loo diiwaan geliyay 152 caawin 576 kulan oo uu u saftay Real Madrid tan iyo markii uu kaga soo biiray Lyon 2009kii.